UMantashe akaneme ngobunini bomhlaba bomphakathi – Bayede News
UMantashe akaneme ngobunini bomhlaba bomphakathi
NGALESI sikhathi ishisa phansi inkulumompikiswano ngodaba
Posted on 3 December 2018 6 December 2018 by Bayede-News
NGALESI sikhathi ishisa phansi inkulumompikiswano ngodaba lomhlaba eNingizimu Afrika, inkantolo isiyenze umphakathi wasemakhaya esifundazweni i-Eastern Cape unqobe umzuliswano wokuqala odabeni oluthinta imayini endaweni. Lolu daba ludala abanye asebeze bathi selunesidumbu phansi njengoba eminyakeni emibili eyedlule kwabulawa uMnu uSikhosiphi Bazooka Rhadebe owayenguSihlalo wenhlangano yomphakathi i-Amadiba Crisis Committee ( ACC). Le nhlangano yabunjelwa ukuvikela umhlaba ukuba ungasetshenziselwa imayini. Isidumbu sikaRhadebe sabe simbobombobo njengoba adutshulwa ngaphandle komuzi wakhe eLurholweni eMbizana . Kukhona inkolelo kumalungu omphakathi kanye nomndeni ukuthi ukufa kwakhe kwabe kuyinto ehleliwe yilabo abahambisana nokuba kube khona imayini.
Okuhlukanisa umphakathi yigunya elinikwa inkampani iTransworld Energy and Mining Resources (TEM), eyinkonyane yenkampani enkulu yase-Australia iMRC . Le nkampani ibinikwa igunya nguHulumeni ukuba imbe i titanium kule ndawo. Kwabanye lokhu bekusho amathuba emisebenzi kanti kwabanye bekusho ukunukubezwa kwemvelo nokuhamba komhlaba wokhokho. Ngokubona ukuthi umnyango oholwa nguMhlonshwa uGwede Mantashe uwela ngasekunikeni igunya kuTEM , Amadiba adlulisele udaba enkantolo emangalela umnyango kanye nenkampani.
Ekhipha isinqumo sakhe eNorth Gauteng High Court, uMehluleli u-Annali Basson uthe umphakathi unelungelo odabeni lobunini bomhlaba , khona lapho wabe esenquma ukuthi uNgqongoshe uma efuna ukunika igunya lokuba kumbiwe endaweni kuyomele athole igunya emphakathini wendawo onelungelo lobunini. Uphinde wathi esikhathini esedlule umphakathi ubungenalo ilungelo lobunini kepha manje usuvikelekile.
UMantashe akakufihlanga ukungenami kwakhe ngalesi sinqumo nathe singahle sisho ukuthi ngeke kube nezimayini kuleli . “Inkinga yami kulesi sinqumo wukuthi kungenzeka eminyakeni eyishumi singabi nazo izimayini njengoba indlela yokunikezela ngegunya lokumba ingase isuke kuhulumeni iye emphakathini. Uma kunalo mqondo kusho ukuthi eminyakeni engama -20 kuya kwengama-30 ngeke ibe khona imayini kuleli. Izimayini (ukumba) kuleli kuthathwa njengesiqalekiso kunokuba ibe yisibusiso. Izimayini azibukwa njengento engakha umnotho kepha zibukwa njengento ezonukubeza imvelo – ukugudlula ilungelo lokumba esikhundleni salo kubekwe elinye ilungelo, ngeke saba nazo izimayini,” kusho uMantashe.
Uqhube wathi, “Isinqumo sikhuluma ngezinto ezimbili. Eyokuqala, yilungelo lokunikeza imvume hhayi elokuxhumana ngokwanele nomphakathi othintekayo. Kusho ukuthi ungavuma noma unqabe. Uma unqaba kusho ukuthi akumbiwa. Lokhu kuphuca uHulumeni ilungelo lokukhipha izimvume zokumba. Uma sekunjaloke kusho ukuthi akusekho ukumba,”kusho uMantashe.
Ngokungangabazisi lesi sinqumo sizoba nomthelela kwezinye izindawo kuleli njengoba kukhona ukukhala kokuthi uBukhosi kwezinye izindawo sebuthengise ngelungelo lobunini bomphakathi. Nabo uBukhosi bukhala ngokuthi uhulumeni ( uMnyango) uyazenzela emhlabeni wokhokho. KwaZulu-Natal sikhulu isikhalo esikhona njengoba uBukhosi nemiphakathi bekhala ngokuxhashazwa nokunukubezwa kwemvelo yizinkampani nabantu abambayo. Endaweni yaseNtembeni kwake kwanokukhala kokuthi uBukhosi sebuthengisile enkampanini thizeni. Ophenyweni olwenziwe yiBayede kuyavela ukuthi kukhona okunuka santungwana eNtembeni.